Gbasara Anyị - Jinan Lide Rubber & Plastic Co., Ltd.
Jinan Lide Rubber & Plastic Co.Ltd.dị na Pingyin Yushan Industrial Park nke Shandong Province.Mountain Tai dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nye ụlọ ọrụ ahụ, na ndịda bụ obodo a na-akpọ Confucius.JinanLide hiwere na 2013, azụmahịa ya bụ isi bụ mmepụta, igwe na ịzụ ahịa maka ngwaahịa plastic na rọba. Ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ emepụtala usoro 9 na ngwaahịa karịrị 100, nke a na-eji n'ọtụtụ ebe.
Ọsọ nyocha nke ngwaahịa ọhụrụ nke ụlọ ọrụ anyị dị oke ọsọ, n'ihi na anyị nwere ndị nrụpụta 3D na ndị ọkachamara pụrụ iche. Anyị azụtala ọtụtụ igwe na-akpụ akpụ CNC, ọ ga-ewe ihe dị ka ụbọchị 5 ka ịzie ebu, ma ọ ga-ewe ihe dị ka ụbọchị iri iji nwee samụzụ ndị dị njikere. Urlọ ọrụ anyị nwere ike wepụta nkwonkwo roba na-agbasawanye ama ma na-emekwa ngwaahịa ọhụrụ OEM dabere na chọrọ. ndị zụrụ azụ.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ngwa ule zuru oke, dị ka rotorless curometer, axial na n'akụkụ ngagharị ule igwe, angular motsa tester, vacuum tester, igwe na-elele elektrọnik igwe, igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, pilo-rebound tester, Shore Durometer, Compress roba. Ọnọdụ Mgbanwe Ọnụnọ nke wdg.
Ka ọ dị ugbu a, anyị enwetara CE, nkwado Wras na akwụkwọ ISO9001. Anyị ga-aga n'ihu na-ahazi nkwado ọhụrụ dabere na ihe ahịa chọrọ.
Kemgbe ntọala nke ụlọ ọrụ ahụ, anyị na-ekwusi ike na amụma nke na-ebi ndụ dị mma na mmepe na-adabere na ezigbo ahịa ahịa. .Lọ ọrụ ahụ na-akwado otu ọrụ zuru oke nke akụrụngwa na-emepụta ma na-anwale, ụlọ ọrụ ahụ na-elekwasịkwa anya na technicis, ọzụzụ. na ihe ohuru.
Yabụ, ụlọ ọrụ ahụ guzobere sistemu njikwa arụmọrụ dị elu na netwọsịa ahịa ngwaahịa. Ngwa ahịa a na-emepụta dabere na ma ọkwa mba na nke mba ụwa. Ugbu a kwa, a na-ebuga ngwa ahịa anyị karịa mba 20 n'ụwa, dịka Anyị, Colombia, HongKong, Singapore, Vietnam, Turkey, Thailand, Algeria, Egypt, Italy, Italy , wdg. ngwongwo anyị na - enweta ezigbo aha n'aka ndị ahịa ma ụlọ ma mba ọzọ.